Tuesday March 05, 2019 - 11:16:02 in Wararka by Super Admin
Max'med Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynaha dowladda Federaalka ayaa markale usafray magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya.
Socdaalka Farmaajo ayaa la sheegay in uu salka ku hayo kulan uu laqaadan doono R/wasaaraha dowladda Xabashida Itoobiya oo sanad ka hor uu usaxiixay in ay Itoobiya qaadato illaa Afar dekadood oo kamid ah dekadaha shacabka Soomaaliyeed leeyihiin.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Farmaajo uu madaxda Itoobiya kala hadli doono qaabka loo dedejin karo mashruuca Itoobiya ay ku maalgashanayso dekadaha Soomaaliya si meesha looga saaro damaca dowladda Imaaraatka Carabta ay ku doonayso in ay kula wareegto dekado hor leh oo aan aheyn Berbera iyo Boosaaso.
Dowladda Farmaajo ayaa wajahaysa gebi dhaclayn dhan walba ah waxaana kamid ah iyadoo aan haysan ciidamo awood leh waqti ciidamada gummeysiga AMISOM ay bilaabeen dib ugurasho waxaana ugu dambeeyay tallaabadii ay ciidamada Kenya uga baxeen magaalada Faafaxdhuun ee gobolka Gedo.
Tan iyo markii Farmaajo iyo kheyre ay majaraha uqabteen hoggaanka dowladda Federaalka ayaa heshiisyo aan horay loo arag lagaleen dowladda Itoobiya iyadoo laxusuusto in Qalbi dhagax oo kamid ahaa Jabhadda ONLF ay udhiibeen Sirdoonka Itoobiya waloow mardambe lasii daayay.
Dowladda Kenya ayaa qudheeda cadaadis siyaasadeed ku haysa dowladda Federaalka si ay uxalaalaysato qeyb kamid ah badda Jubbada Hoose, maalin ka hor ayay magaalada Asmara ee dalka Ereteria shir xasaasi ah ku yeesheen madaxweynahaasha dowladaha kala ah Itoobiya,Kenya iyo Eereteria.
Xasan Garguurte "Ammaanadii lagu qabay dowladda Farmaajo waa sii lumaysaa" VIDEO.